म सबैलाई मिलाएर लान सक्छु : निधि - EKalopati
म सबैलाई मिलाएर लान सक्छु : निधि
नेपाली कांग्रेसका उपसभापति विमलेन्द्र निधिले सबैलाई मिलाएर लान सक्ने कारण नै सभापतिको रूपमा अघि बढ्न लागेको बताएका छन् । उनले कांग्रेसभित्र सबैलाई समेटेर लान सक्ने दृढ इच्छा भएकोले नै सभापतिको दाबी गरेको बताएका छन् । साथै उनले आफूले सभापतिको उम्मेदवारी घोषणा नगरिसकेको र सबैको साथ पाएमा सभापतिको दावी गर्ने पनि बताएका छन् । सकेसम्म सबैलाई समेटेर सभापति हुने उनको बिचार छ । प्रस्तुत छ उपसभापति निधिसंगको कुराकानी :
महाधिवेशनको चटारोमा कसरी अघि बढ्नुभएको छ ?
नेपाली कांग्रेसको महाधिवेशन धेरै पहिले हुनुपर्ने हो । ढिलो भएपनि भदौ १६,१७ र १८ गतेका लागि तोकेका छौ । महाधिवेशन हामीले गर्नैपर्ने हुन्छ । कोरोनाले गर्दा धेरै अवरोध आईरहेको छ । जिल्ला जिल्लामा जानुपर्ने धेरै सार्थीहरुसंग भेट गर्न सकिरहेको छैन । कोरोनाको कारणले मैले गर्न सकिरहेको छैन । धेरै साथीहरुले गर्न सकिरहनुभएको छैन । त्यसको बाबजुद मैले टेलिफोन गरेर ७७ वटै जिल्ला सभापतिहरु, १ सय ६५ संसदीय निर्वाचन क्षेत्र सभापति, पुरानो २ सय ४० जना महाधिवेशन प्रतिनिधिहरुलाई तथा संगठनका नेताहरु सबैसंग मैले फोनबाट म उम्मेदवारी दिन चाहन्छु । तपाईहरुको सहयोग चाहिन्छ भनेको छु । त्यो भन्दा अगाडि पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा ज्युलाई नै भनेको थिएँ । रामचन्द्र पौडेल जी,सिटौला जी, प्रकाशमान जी, शशांक जी लगायत सबैलाई र केन्द्रीय समितिको साथीहरुलाई मैले सरसल्लाह गरेकै हुँ । प्राय सबैले मेरो उम्मेदवारीलाई सकारात्मक दृष्टिकोणले लिनुभएको थियो । छ पनि ।
तीन युवा नेताको निरन्तर संवादले नयाँ गुटको उदय भयो भन्छन् नि ?
नेपालको राजनीतिमा विश्लेषण मात्रै होइन अति विश्लेषण गर्ने बाँनी छ । फेसन पनि छ । स्वार्थ समुह पनि होइन । अर्को नयाँ गुट पनि होइन । केही पनि होइन । म पनि नेपाली कांग्रेसको दलिय राजनीतिमा, संगठनात्मक राजनीतिमा आजदेखि छैन । त्यो भन्दा पहिला म विद्यार्थी संगठनमा थिएँ । लोकतान्त्रिक आन्दोलनको प्रक्रियामा (दरबारमा) हामी जेल गएका थियौ । म पनि जेल गएको थिएँ । त्यसकारणले मैले नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वको लागि जब आफुलाई प्रस्तुत गर्दछु, त्यसमा स्वभाविक हुन्छ शेरबहादुर जी , रामचन्द्र जी , सिटौलाजी संग पनि भेट्ने । प्रकाशमान जी, शशांक जी संग पनि भेट्ने । प्रकाशमान जी पनि आजै राजनीतिमा लाग्नुभएको होइन । प्रकाशमान जी त पुर्व उपसभापति पुर्व महामन्त्री भईसकेको मान्छे हो । यो भन्दा पहिला पनि भेटघाट गरेकै हो ।
शशांक जी राजनीतिमा ढिलो आएपनि उहाँ त निर्वाचित महामन्त्री हो नि । नवलपरासीबाट त तीनपटक निर्वाचित सांसद हुनुहुन्छ । त्यसकारण म आफुलाई सभापतिको उम्मेदवारको रुपमा प्रस्तुत गरिरहँदा म पहिलो कोशिष गर्छु सर्वसम्मति बन्नका लागि । सबैको तर्फबाट र्निविरोध सभापति बन्नु भन्ने चाहना हुनु स्वभाविक हो नि त । त्यसको लागि म घरमै बसेर हुन्छ र ? मैले सबैसंग भेट्नु पर्छ । मैले प्र्रकाशमान जी र शशांक जी संगमात्रै भेटेको भए एउटा कुरा हो । शेरबहादुर जीसंग भेटेको छु । रामचन्द्र जीसंग भेटेको छु । सिटौला जीसंग भेटेको छु । प्रकाशमान जी र शशांक जी संग पनि भेट्दा लञ्च मिटिङ चाहीँ भयो । पहिले पहिले डिनर मिटिङ हुन्थ्यो । अहिले पनि भएका छन् । तपाईहरुको ध्यान त्यतापट्टि गएन । अहिले प्रकाशमान जी, शशांक जी र मैले राजनीतिमा पदाधिकारी भईसकेका हौं ।
नयाँ प्रवेश गरेको होइन । नयाँ आएको होइन । हामी हैसियतमा छौ । हैसियत भन्नाले एउटा भूमिकामा जिम्मेवारीमा छौ । हामी जिम्मेवारीमा भएकाले सामुहिक रुपमा भूमिका निर्वाह गर्न सक्छौ कि र सामुहिक रुपमा नेपाली कांग्रेसलाई राष्ट्रिय राजनीतिको सन्र्दभमा युनाईटेड रुपमा प्रस्तुत गर्न सकिन्छ कि ? त्यो प्रयास गर्नु त हाम्रो कर्तव्य पनि त हो नि त । त्यसै अर्थमा लिनुपर्दछ । यो कुनै नयाँ गुट निर्माण गर्नको लागि पनि होइन बरु गुटहरुको राजनीतिलार्ई भत्काउनका लागि सबैलाई समेटेर हामी हिड्नुपर्छ है भन्नका लागि हो । त्यस अर्थमा लिनुपर्छ । सभापतिको उम्मेदवार भएपछि प्रकाशमान जीको घरमा नै गएँ । दुई पटक भेटेँ । म सभापतिको उम्मेदवार हुन्छु तपाईको सहयोग चाहियो । भन्नुपरो नि त एक्लै आफैले त जितिदैन नि त । त्यस्तै शशांक जी को घरमा पनि गएँ । अरु नेताको घरमा पनि गएँ । उहाँहरु पनि उम्मेदवार भनेर आफुले प्रस्तुत गर्नुभएको छ । त्यसकारण उम्मेदवारहरुबीचमा छलफल हुनु त सामान्य कुरा हो नि । नेपाली कांग्रेस र देशको राजनीतिको बारेमा साझा धारणा बनाउन सकियोस् भनेर हामीले केन्द्रीय समितिका अन्य सदस्यहरुसंग पनि छलफल गर्दैछौ ।
महाधिवेशनले नेतृत्व हस्तान्तरण गर्न सक्ला भन्नेमा विश्वस्त हुनुहुन्छ ?
म तपाईको प्रश्नको आशय र सिद्धान्तसंग सहमत छैन । नेपाली कांग्रेसको नेतृत्व हस्तान्तरणमा जहिले पनि जटिल छ भन्ने होइन । नेपाली कांग्रेस पार्टी नै यस्तो पार्टी हो, डेमोक्रेसीमा के भनिन्छ भने नि स्मुथ ट्रान्सफर अफ लिडरसिप भनेको देखिन्छ । कस्तो छ भनेर । नेपाली कांग्रेसमा स्मुथ ट्रान्सफर अफ लिडरसिप देखिन्छ । यो डेमोक्रेसिको ब्युटी हो । यो निर्वाचन प्रणालीबाट भईरहेको छ । विपि कोइराकाले समयमा पनि निर्वाचन हुन्थ्यो । त्यसपछि त डेमोक्रेशि नै रहेन । जब डेमोक्रेसी रिस्टोर भयो नेपालमा, त्यसपछि गिरिजाप्रसाद कोइराला जीले चुनाव लड्नुभयो र जित्नुभयो । शुशिल पनि चुनाव लड्नुभयो, जित्नुभयो । शेर बहादुर चुनाव लड्नुभयो, जित्नुभयो ।
नेतृत्व प्रणालीबाट नेतृत्वको हस्तान्तरण गर्ने पार्टी यदि नेपालमा कोही छ भने त्यो नेपाली कांग्रेस पार्टी हो । नेपालमा मात्रै होइन भारतमा पनि देख्निँ म । त्यसकारण नेपाली कांग्रेसमा जहिले पनि नेतृत्व हस्तान्तरण प्रक्रिया जटिल हुन्छ भन्नेमा म सहमत छैन । नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय सभापति वा पदाधिकारीहरुको निर्वाचन ४÷५ हजार महाधिवेशन प्रतिनिधिले गर्दछन् । त्यो प्रतिनिधिहरु टीका लगाएर आएको होइन । निर्वाचन प्रणालीबाट तल्लो निकायबाट वडाबाट, वडाबाट पालिकामा, पालिकाबाट क्षेत्र र क्षेत्रबाट केन्द्रमा आउँछ । यसमा कसैले कसैलाई रोक्न सक्क्तैन । जसले मतदाताको भोट पाउँछ, त्यो निर्वाचित हुन्छ । यो अन्तत महाधिवेशन प्रतिनिधिहरुमाथि निर्भर रहन्छ । महाधिेशन प्रतिनिधिहरुलाई कसरी प्रभावित गर्ने , आफ्नो पक्षमा कसरी पार्ने भन्ने कुरा उम्मेदवारमा भर पर्छ । कसैले कसैलाई नलड भन्दैन नि त कसैले जानी जानी फलानोको समर्थन पाईन भने म जित्न सक्दिनँ भनेर सोचेर आफै उम्मेदवार नहुनु एउटा कुरा हो । तर उम्मेदवार हुनका लागि कसैले कसैलाई रोक्दैन नेपाली कांंग्रेसमा । रोकेको पनि छैन । रोक्दैन पनि ।
देउवाजी सँधै सभापति लडिरहनुभएको छ यसको असर कस्तो होला ?
निर्वाचन प्रणाली संसारमा लोकतन्त्रका लागि सबै भन्दा उत्तम उपकरण हो । निर्वाचन प्रणालीको पनि अवगुणहरु छन् । तर वेष्ट मोडलहरु मध्ये सबै भन्दा वेष्ट मोडल भनेको निर्वाचन प्रणाली नै हो । हाम्रा राजनीतिक शास्त्रीहरुले पठाउनुभएको पनि त्यही हो र लेख्नुभएको पनि त्यहि हो । नेपाली कांग्रेसको निर्वाचनको सम्बन्धमा पार्टी सभापति शेर बहादुर देउवा जीले लड्छु भनिसकेपछि नलड्नुस् भनेर अनुरोध गर्नु एउटा कुरा हो । अधिकार त हो नि उहाँले । हामीले के भन्छौ भनेदेखि शेर बहादुरजी, रामचन्द्र जी, सिटौला जी नलड्दिए हुन्थ्यो । १३ औ महाधिवेशनका कोही पनि नलड्दिए हुन्थ्यो भन्ने लागेको छ । लागेर मात्रै त भएन नि त । लड्ुछु भनेपछि नलड्नु है भन्न त मिल्दैन । त्यसकारण राजनीति नै जटिल हुन्छ । राजनीतिक चीज नै , क्षेत्र नै जटिल चीज हो । निर्वाचन प्रणाली पनि जटिल हो । निर्वाचन प्रणालीलाई सम्पन्न गर्न, सम्पादन गर्न जुन स्वभाविक जटिलताहरु छन्, त्यो जटिलताहरु त हामीले व्यहोर्नुपर्छ ।
अन्ततोगत्वा देउवाजीलाई नै सघाउन पुग्नुहुन्छ कि ?
महत्वपुर्ण निर्णय मैले हचुवा र हतारमा लिन्न । मैले सभापतिमा लड्छु भनेको छोड्नका लागि होइन । मैले सभापतिमा उम्मेदवारी दिएको मुल उद्देश्य के हो भने , शेर बहादुर देउवा रामचन्द्र जी १३ औ महाधिवेशनका उम्मेदवार हुन् । उनले जति काम गर्नुपर्ने थियो । उहाँहरुले जति काम गर्नुपर्ने थियो देशको लागि पार्टीको लागि, गरिसक्नुभएको छ । उहाँहरुले अरु पनि काम गर्न बाँकी छ । फरक भूमिकामा उहाँहरुको सक्रियता हामीले अपेक्षा गरेका छौ । पार्टीको कार्यकारणीको रुपमा उहाँहरुले गर्न बाँकी रहेका कामहरु मेरो अगुवाईमा होस् भन्ने चाहना हो । मेरो चाहाना के हो भने ढिलो चाडो मुलुकमा जे जे हुन्छ, आमचुनाव, प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन प्रदेशसभाको निर्वाचन, स्थानीय तहको निर्वाचन । प्रमुख रुपमा प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन हो ।
प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन जहिले हुन्छ त्यसमा नेपाली कांग्रेसको रुख छापलाई जिताउनु आवश्यक छ । नेपाली कांग्रेसको सदस्यको हैसियतले मेरो कर्तव्य त्यो हो । मैले पहिले भन्दा बढी जिम्मेबार भएर नेपाली कांग्रेसलाई आगामी निर्वाचनमा जिताउनु पर्दछ । जनता र मतदाताको बीचमा नेपाली कांग्रेसलाई यसरी तयार गरौ, आम मतदातालाई लागोस् नेपाली कांग्रेस एक भएर आएको छ । नेपाली कांग्रेस ताजा भएको आएको छ । नेपाली कांग्रेस सक्षम भएर आएको छ । नेपाली कांग्रेस बैचारिक रुपमा पनि प्रष्ट भएर आएको छ , सांगठनिक रुपमा पनि प्रस्ट भएर आएको छ र नेपाली कांग्रेसले यो देशमा अहिले भाँडभैलो भईरहेको छ सबै क्षेत्रमा–राजनीतिक क्षेत्र, व्यवसायीक क्षेत्र, सामाजिकक्षेत्र , अन्तराष्ट्रिय सम्बन्धको क्षेत्र , उद्योग व्यवसायको क्षेत्रमा ।
हामीले ल्याएको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संसदीय प्रणालीको रक्षा र सफल कार्यान्वयन गर्नु अहिले कुनै पनि राजनीतिक दलको जिम्मेवारी हो । अरु राजनीतिक दलले त्यो जिम्मेवारी निर्वाह गर्न सकेन ।
जनताले जिताएर जसलाई पठाईदियो प्रयोगशालाबाट देखि सकियो उनीहरुले त्यो जिम्मेवारी पुरा गर्न सकेन । अब त्यो जिम्मेवारी नेपाली कांग्रेसको हो । त्यसकारण नेपाली कांग्रेसले १४ औ महाधिवेशनबाट संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संसदीय प्रणालीको संरक्षण गर्नु, त्यसको स्वामित्व लिनु, त्यसलाई अझै सम्बद्र्धन गर्दै लगेर सफल कार्यान्वयन गरेर जनता र देशको हितमा कार्यासञ्चालन गर्नु आवश्यकता छ । त्यो आवश्यकता पुरा गर्नका लागि म नेपाली कांग्रेसको सभापति को उम्मेवारको रुपमा प्रस्तुत गरेको छु । त्यसकारण छोड्नका लागि कोही अरुसंग सम्झौता गर्नका लागि वा तपाईले भनेजस्तो स्वार्थ समुह केही पनि होइन । मेरो एक मात्रै उद्देश्य त्यही हो । त्यसैका लागि मात्रै हो मेरो उम्मेदवारी ।
सभापतिमा तपाईंको साँच्चै उम्मेदवारी त हुन्छ नि ?
पहिला हामी सबै महाधिवेशन प्रतिनिधि भएर आउनुपर्यो औपचारिक रुपमा । कांग्रेसको उम्मेदवार र मतदाता बन्नका लागि महाधिवेशन प्रतिनिधि बन्नै पर्छ । महाधिवेशन प्रतिनिधि चयन भईसकेपछि मात्रै टिम बनाउने हो । मेरो टीमको उपसभापति, महामन्त्री को हुने भन्ने अनौपचारिक छलफल मैले पनि गरिरहेको छु । बाहिर ल्याएको छैन । ल्याउनु जरुरी पनि छैन । उपयुक्त समय आएपछि ल्याउँछु ।
कांग्रेसमा सभापति देउवाको कदमजमको नीति बाँकी नै रहन्छ कि ? के हुन्छ ?
हाम्रो नेपालको समाज विविधताले भरिएको समाज हो । विविधताको पहिचान गर्ने हो भने अहिले थरिथरिको विविधता छ । जातिय, भाषिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, भौगोलिक विवधताहरु छन् । विविधताहरुलाई पहिचान गरेर स्वीकार गर्नुपर्छ । नेपालको लागि कुनै पनि विकासको योजनाहरु बनाउने क्रममा यसलाई ध्यानमा राख्नुपर्छ । यसलाई समस्या हो भनेर नकारात्मक भावना राखेर सोच्ने हो भने फेरि पनि अग्रगामी दिशामा जान सकिदैन ।
एनआइसी एशिया बैंकद्वारा मोबाइल बैंकिङ्ग एपकोस्तरोन्नति
स्वतन्त्र उम्मेदवारहरुले पनि गठवन्धन गर्ने, पिआर होल्डरलाई उम्मेदवार नमान्ने
प्रचण्ड, नेपाल लिएर निजगढ विमानस्थल अनुगमन गर्न पुगे प्रधानमन्त्री देउवा
काठमाडौंमा हैजा बढ्दै आज थप दिन जनामा हैजा देखियो
Previous articleगैंडाकोटका करिब ४५ घर डुबान
Next articleभक्तपुरको बजेट सर्वसम्मतिले पारित
संवाददाता - असार २२, २०७९ 0
काठमाडौँ । गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले गण्डकी प्रदेशमा आउन लागेको आमसञ्चार विधेयक प्रेसमैत्री बन्ने बताइएका छन् । नेपाल प्रेस युनियन...
तीन वर्षीय बालकको १५ दिनपछि सकुशल उद्धार
काठमाडौँ । जनकपुरबाट अपहरणमा परेका तीन वर्षीय बालकलाई प्रहरीले १५ दिनपछि सकुशल उद्धार गर्न सफल भएको छ । गत असार ६ गते...
काठमाडौँ । बागलुङ नगरपालिकाले रु एक करोडको लागतमा पुनःनिर्माण गरेको बागलुङ बजारमा रहेर वीरेन्द्र–ऐश्वर्य पार्क । पार्क पछिल्लो समय व्यवस्थापनको अभावमा जीर्ण...
अर्थमन्त्रीद्वारा राजीनामा : राजीनामा घोषणा गर्दै भने – ममाथि पूर्वाग्रह राखियो
काठमाडौँ । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आज आफ्नो पदबाट राजीनामा दिएका छन् । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा उनले आफूले पदबाट राजीनामा दिएको बताए ।...
तीनजान फरार प्रतिवादी पक्राउ
काठमार्डौँ । प्रहरीले तीनजना फरार प्रतिवादीलाई पक्राउ गरेको छ । पक्राउ पर्नेमा भुम्लु गाउँपालिका–३ का ४६ वर्षीय दावा तामाङ, ललितपुरको टीकाथली–९ स्थायी...